Herin'ny maizina sy Knights no miandry anao ao amin'ny Blades of Brim | Androidsis
Avy amin'ireo mpamorona ny Subway Surfers dia misy mpihazakazaka tsy manam-petra antsoina hoe Blades of Brim
Ny mpihazakazaka farany tsy misy farany izay nanananay niaraka tamin'ireto tsipika ireto, izay mazàna kokoa tamin'ny fomba Temple Run, dia ilay miaraka amin'ilay sarimihetsika tsara vao nivoaka ny The Jungle Book. En izany tontolo 3D izany izay misokatra Eo alohan'ny masontsika amin'ny alàlan'ny efijery finday avo lenta, ny fanovana mitsambikina sy ny lalana dia ahafahantsika misoroka ireo fahavalo sy vato misakana rehetra izay hitanareo izay nandalo sinema ho hitanareo tao an-trano. Sokajy iray feno lohateny avo lenta amin'ny Android ary matetika dia mamoaka iray avy amin'ireo andalana ireo izahay raha ny ankehitriny miaraka amin'ny Blades of Brim.
Blades of Brim dia mpihazakazaka tsy misy farany dia avy amin'ireo mpamorona ny Surway Surfers lehibe, noho izany manana kalitao be dia be isika amin'ny voalohany amin'ity ekipa ity izay nandefa ny iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ity sokajy ity. Amin'ity traikefa nahafinaritra vaovao ity, mifandraika bebe kokoa amin'ny vanim-potoana medieval sy sabatra, dia mila manambatra hery amin'ireo maherifon'ny Brim ianao mba hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny tafiky ny jiolahimboto manafika. Izao tontolo izao epic amin'ny mpihazakazaka tsy misy fiafarana izay itondran'ny knights, sabatra ary tontolo miloko anao amin'ny fitsangatsanganana mahafinaritra izay tokony hanananao fiheverana tsara handresena izay vato misakana rehetra manjo anao.
1 Avy amin'ny mpamorona Subway Surfers
2 Ny majika an'ny Brim dia tonga amin'ny findainao
Avy amin'ny mpamorona Subway Surfers
Ny fananana ny fanohanan'ny ekipa iray izay nandefa iray amin'ireo mpihazakazaka tsy misy farany tsara indrindra ananantsika amin'ny Android, dia midika fa be dia be izany. Ary tsikaritra izany amin'ny lalao voalohany lalaovinao amin'ity lohateny ity, izay tamin'ny voalohany nambara ho iOS manokana, fa io lalao SYBO io dia nitondra tamin'ny Android ihany. Naharitra herintaona ny fahatongavan'ity lalao ity, saingy araka ny filazan'izy ireo dia tsara kokoa noho ny tsy misy.
Mpihazakazaka tsy misy farany mifantoka amin'ny a ady sabatra ary amin'ny fanatsarana ireo mahery fo isan-karazany azonao lalaovina. Ny iray amin'ireo hatsarany dia mitovy, mba afaka misambotra ny iray na ny hafa amin'ny fahaizany manokana izay tsy maintsy ianaranao. Afaka manao combo ho an'ny hery fanafihana lehibe kokoa ianao ary amin'izany hahazo isa bebe kokoa. Ny tanjona dia ny hamono ny fahavalo rehetra azonao atao amin'ny hazakazaka tsy manam-petra anao hamonjy an'izao tontolo izao.
Ny majika an'ny Brim dia tonga amin'ny findainao
Azonao atao ny manamboatra ny endri-tsoratra rehetra amin'ny fitaovam-piadiana sy fiadiana tsara kokoa, tendrombohitra manokana ary mahazo hery ahafahana mamono ny fahavalo betsaka kokoa amin'ny tifitra iray. Izany rehetra izany dia tsy maintsy atao raha mifantoka amin'ny làlana ianao mba tsy hihaona amin'ireo biby goavambe ratsy fanahy izay hanandrana hampijanona ny fiainanao epic.
Mpihazakazaka tsy manam-petra tsara izay ananantsika toetra mampiavaka sasany toy ireo biby fiompy ireo, amin'ny endrika amboadia, soavaly ary dragona elementals. Lalao izay lokon'ny loko sy zava-drehetra ary amin'izay ianao dia ho tonga amin'ny fotoana iray izay tsy hijanonanao amin'ny fanaovana swipe hamonoana ny sabatra sy handresena ireo fahavalo rehetra ireo.
Azonao ilay izy afaka maimaimpoana avy amin'ny Google Play Store miaraka amin'ny micropayments mahazatra, zavatra efa mahazatra ao amin'ity karazana lalao freemium ity. Raha nahagaga anao ny Subway Surfers, ny Blades of Brim dia atolotra tanteraka mba hahazoany tombony indrindra amin'ity lohateny vaovao ity.
Toy ny nolazaiko ihany, Blades of Brim dia manana accent tsara amin'ny loko ary tontolo manodidina novolavolaina tamim-pahamendrehana mba hitondrana antsika zava-mahadomelina mahatsiravina miorina amin'ny tontolon'ny Moyen Orient. Na ny fahavalo na ny maherifo dia noforonina tsara ary mahita kalitao tsara koa isika amin'ny sary mihetsika. Lalao video manatsara ny kalitaon'ny efijery finday avoakanao, ka raha manana vahaolana tsara ianao dia hankafy azy tsara.
Amin'ny fampiharana teknika dia marihina fa dia avy amin'ny ekipa manam-pahaizana amin'ny lalao ho an'ny fitaovana finday, ka raha io karazana lalao video io no anao, androany no andro vintana ho anao.
Fampisehoana teknika tsara
Ny endri-tsoratra mahafinaritra
Tsy misy miolakolaka tsy ampoizina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Avy amin'ireo mpamorona ny Subway Surfers dia misy mpihazakazaka tsy manam-petra antsoina hoe Blades of Brim
Zazalahy roa dia manomboka amin'ny sary an-tsary mahafinaritra ao amin'ny Brothers: A Son of Two Sons